Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyo Shisheeyaha Lala Beegsaday. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Qaraxyo Shisheeyaha Lala Beegsaday.
calamada December 25, 2016 1 min read
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo culus oo saacadihii lasoo dhaafay kolanyo ka tirsan Kufaarta Afrikaanta lala beegsaday kuwaasi oo ka dhacay duleedka deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelada dhexe.
Qaraxyada oo ah labo qarax oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxaa lala beegsaday kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen gaalada Burundi kuwaasi oo ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Miir-taqwa iyo Biyo cadde ee gobalkaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in mid ka mid ah gaadiidka shisheeyaha gabi ahaan uu ku burburay qaraxa halka gaari kalane waxyeela xoogan laga gaarsiiyay shisheeyaha.
Warar hoose ayaa sheegaya in sidoo kale tiro askar ah oo ka tirsan kuwa Burundi baqti iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxyadaasiâ€™gobalka Shabeelada dhexe ayaa ka mid ah goobaha sida weyn loogu dhiig bixiya shisheeyaha soo duulay.
Previous: Ku Dhawaad 100 Askari Oo Dowlada Ruushka Kaga Dhimatay Shil Diyaaradeed.
Next: Xaalad Dagaal Oo Ka Taagan Magaalada Gaalkacyo.